Welded Steel Pipe Production Line, Cold Roll Owenza Line - Teneng
Imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle nesikweletu ukusivumela sikwazi ukusetha amahhovisi egatsha nabasabalalisi ezweni lethu.
IShijiazhuang Teneng Electrical & Mechanical Equipment Co, Ltd.ngumkhiqizi wobungcweti bolayini wokukhiqiza wepayipi wensimbi oshisayo, umugqa obandayo wokwenza irowu, umugqa wokunquma, umugqa wokusika nobude nemishini ehlobene ehlobene. Inkampani iTeneng ibhizinisi lesimanje elikwaziyo ukwenza ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza nokuthengisa. UTeneng uyilungu lomkhandlu le-China Roll Forming Association, ilungu lomongameli we-Hebei Steel Tube Trade Association.
Imishini ye-Teneng iyimishini yokukhiqiza ithubhu esebenza kahle kunazo zonke emhlabeni. E-China, abasebenzisi abaziwayo yi-Hebei Jingye Group, iSANY Group, i-China Shipbuilding Industry Corporation